Mid ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka Banaadir oo maanta xilka laga wareejinayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 29 March 2014 4 April 2019
Muqdisho– Mareeg.com: Waxaa la filayaa in maanta xilka uu wareejiyo gudoomiyaha degmada Boondheere, Cumar Istakiin, kadib markii booskiisa loo magacaabay gudoomiye cusub.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir Jen. Xasan Maxamed Xuseen Muungaab ayaa dhawaan gudoomiyaha degmada Boondheere u magacaabay, Qaasim Cabdulle Xasan (Qaasim Dheere) oo ah nin dhallinyaro ah oo wax kusoo bartay dalka Yemen.
Waxaa lagu wadaa in maanta xarrunta degmada Boondheere lagu qabto munaasabad ay xilka kula kala wareegayaan gudoomiyihii hore Cumar Istakiin iyo gudoomiyaha cusub, Qaasim Cabdulle.
Horay waxaa xilka looga qaaday gudoomiyaashii degmooyinka Shibis, Hiliwaa iyo Dharkeynley, waxaana degmooyinkaas loo dhibaay rag dhallinyaro ah wax soo bartay.
Inta badan gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir ayaa ahaa rag kazoo jeeday hogaamiye kooxeeyadii Muqdisho, halka qaar kalana ay magacaabeen dowladihii KMG ahaa, kuwaasoo iyaguna u dhaqmayay qaab maleeshiyo beeleed.
Alshabaab oo saddex qof ku toogtay degmada Baraawe ee Shabeellaha Hoose